Shir looga hadlayo dib u qabsashada Ceelbuur oo ka soconaya Dhuusamareeb Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Shir looga hadlayo dib u qabsashada Ceelbuur oo ka soconaya Dhuusamareeb Culumaaudiinka Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa Shir looga hadlayo sidii ay dib ula wareegi lahaayeen degmada Ceelbuur waxa ay ku leeyihiin degmada Dhuusamareeb.
Shirkaani oo looga hadlayo amaanka deegaanada ay ka taliso Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolada dhexe ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, iyadoo ay ka qeyb galayaan Masuuliyiin ka tirsan Ahlu Sunna.
Gudoomiyaha Golaha fulinta Ahlu Sunna Sheekh Maxed Yuusuf Xeefoow ayaa u sheegay Saxaafadda in kulankaani waxyaabaha looga hadlayo ay ka mid tahay sidii ay dib ula wareegi lahaayeen deegaanadii ay isaga baxeen oo ay ka mid tahay magaalada Ceelbuur.
Xeefoow ayaa sheegay in sidoo kale ay ka doodayaan xasilinta amaanka magaalooyinka gobolka iyo sidii isbadal aan horay loo arag loogu sameen lahaa dhinca amaanka oo uu sheegay in wax badan ay ka badali doonaan.
Shirkaani waxa uu imaanayaa iyadoo ciidamada Ahlu Sunna iyo Ethiopia ay isaga baxeen dhawaan magaalada Ceelbuur iyo deegaanka Wabxo halkaasi oo hada ay maamulkooda la wareegeen Al Shabaab.